Bibikely na kongona otodectika amin'ny alika | Tontolo alika
Ny fananantsika biby fiompy ao an-tranontsika dia midika hoe mikarakara azy ireo, manome sakafo azy ireo ary milalao amin'izy ireo, ankoatry ny zava-misy karakarao ny alikanay Lafin-javatra iray lehibe io, satria tsy toa antsika olombelona, ​​ny ankamaroan'ny biby azo amboarina (alika na saka amin'ny tranga ankapobeny) dia mirona amin'ny mahazo aretina sasany izay miavaka amin'ny fivoarana amin'ny fahanginana nefa tsy misy fiatraikany amin'ny fihetsika na ny fahasalaman'ny biby eo noho eo.
Amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka karazana toe-javatra iray izay fahita matetika eo amin'ny biby fiompintsika sy ny mpitsabo biby no niantso azy io ho toy ny aretin-tsofina.
1 Inona ny mangana amin'ny alika?
2 Misy ve ny ahiahy momba an'io aretina io?
Inona ny mangana amin'ny alika?
Otodectic mange dia tsy inona fa ny andiam-soritr'aretina vokatry ny fisian'ny otodectes cynotis mite ao amin'ny lohan'ny sofin'ny biby fiompy ary manorim-ponenana ao ny fihinana amin'ny faritra mahavelona ny sofina ivelany an'ny biby.
Ity mite ity dia mahavita mitombo amin'ny taha mampiahiahy, satria ny sofina ivelany ny biby Hita ho tontolo tena mety amin'ny tanjony.
Mandritra ny fizotrany, ity mite ity dia mamela fahamainana miavaka ao amin'ilay faritra ary koa diky maro izay no mahatonga ny mahazo aina sy mangidihidy Ao amin'ny faritra. Rehefa lasa matotra kokoa ity fanafihana ity dia mety hanimba ny lakandrenin'ilay biby io. Izany no antony ny fahadiovana amin'ity faritra ity dia tokony hatao lohalaharana ary raha te hahalala ny niandohan'io aretina io dia ilaina ny manadio ny trano iray manontolo.
Soa ihany, ireto mite ireto dia mamaly amin'ny alàlan'ny fanafody sy savony. mora be ny miatrika azy ireo Raha mbola ara-potoana ny Diagnostika dia tsy ilaina ny ho mpitsabo biby feno hamantarana ireo sisan-tavela navelan'ity katsentsitra ity.
Hafahafa ihany, ny otodectes cynotis Izy io dia zavaboary iray izay tsy hita raha tsy amin'ny alàlan'ny mikraoskaopy, manangona ny dikany ka lasa hitan'ny mason'olombelona ho teboka mainty tsotra izay tsy sarotra esorina.
Ho foana ny raharaha ny fomba hirosoana rehefa mahita ny fisian'ireto mpanafika ireto, ny manam-pahaizana dia mamporisika hatrany ny hamerenana ny fitsidihana mba haharaka ny fanombanana ara-batana ny biby fiompinay, manana fitaovana sy fomba hahitana an'io karazan-javatra io izy ireo, saingy amin'ny ankapobeny ary miaraka amin'ny torolàlana mety dia azo atao ny mitsabo ao an-trano tsy matahotra ny handratra ny alikanay.
Toa hafahafa, tsy misy toerana ao amin'ny vatantsika io aretina ioRaha ny fahitana azy dia tsy liana amin'ny epidermis an'ny biby fiompintsika fotsiny ireto bitika ireto ka tsy atahorana miaraka amin'izy ireo isika, na dia efa manana karazana zavaboary hafa manandrana ny hodintsika sy ny tsiranoka aza ny olombelona, ​​saingy eo an-daniny io.
Na ahoana na ahoana, dia eo amin'ny alika ihany no ahitana ireo kongana ireo, maharitra sy areti-mifindra ny fizotran'ny aretina Eo anelanelan'ny biby fiompy, manosotra fotsiny ny etany, mamindra nit na vola kely tsotra ary azonao antoka fa hiverina amin'ny biby hafa ity tsingerina ity.
Misy ve ny ahiahy momba an'io aretina io?
Otodectic mange dia tsy antony tokony hanahirana, aseho azy ny fomba fifehezana azy io fa tokony ho fantatsika koa ny tranga ratsy indrindra ary rehefa avela hivoatra izy io ny tsingerin'ny mite amina teboka iray mampiahiahy ary rehefa mitranga izany dia ny tena miharihary dia ny fisian'ny lava-kazo mavesatra sy maloto ary mena, mangidihidy mafy ary mahazo aina.
Mety hampatahotra izany saingy tsy izany, raha mailo ianao raha misy porofo ny fisian'ireto bitika ao amin'ny biby fiompinao ireto. Tsarovy, ireo dia matetika kokoa amin'ny biby kely (tafiditra amin'izany ny alika kely sy ny saka kely) izay mazàna dia tsy misy vongan-tsofina ary be volo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Bibikely na kongona otodectika amin'ny alika
Ahoana ny fomba fihetsika raha mijaly noho ny famelezana hafanana ny alikako